ट्राफिक जेनरेट ई - वाणिज्य ब्याकलिङ्कहरू सिर्जना गर्ने तरिकाहरू के हो?
जब सबै खोज इन्जिन अनुकूलन प्रविधिहरू तपाईंको साइटमा उचित रूपमा लागू गरिन्छ, यसले तपाईको व्यवसायको खोजी खोजी परिणाम पृष्ठमा उच्च र लक्षित ट्राफिकको स्थिर प्रवाहलाई मद्दत गर्नेछ।. यसले खोज इन्जिन अनुकूलन ईकॉमर्स वेबसाइटहरूको लागि अत्यधिक मूल्यवान बनाउँछ. यदि यो सामाजिक सञ्जाल मार्केटिंग, इमेल मार्केटिंग, र अन्य प्रोमोशनल अभियान संग जटिल हो भने यो कुनै पनि अनलाइन व्यापार समृद्ध बनािन्छ.
एसईओ यसको आधारभूत ढाँचामा उप-र अनुकूलित पृष्ठमा विभाजन गर्न सकिन्छ. अन-पृष्ठ अप्टिमाइजेसन सबै अन-साइट प्रविधिहरूलाई बुझाउँछ जुन तपाइँको वेब स्रोतको साथ प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न सेवा गर्दछ. यसबाहेक, यसले खोज इन्जिनहरूलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ कि तपाईंको साइटले उपयुक्त उपयोगकर्ता क्वेरिको लागि यो कार्यक्रम गर्ने भनेर के हो. अफ-पृष्ठ अप्टिमाइजेसनले खोज इन्जिनहरू तपाईको वेब पृष्ठलाई प्रयोगकर्ताको प्रश्नको सबै भन्दा सान्दर्भिक रूपमा छनौट गर्ने कार्य गर्दछ. यसको मुख्य भाग पछाडीबाट आउँछ. तपाईं अन्य आश्रित सम्बन्धित वेब स्रोतहरु देखि गुणवत्ता ब्याकलिंक प्राप्त गर्न को लागी तपाईंको साइट को लक्षित लक्षित दर्शकहरु लाई देख्न को लागि.
उनको शब्द मा ब्याकलिंकहरु विभाजित गरियो र डिलिवरी मा विभाजित हुन्छ. पछाडि पछाडिको लिंकहरू तिनीहरू हुन् जुन तपाइँको वेबसाइट SEO मा योगदान दिन्छन्. यस्ता लिङ्कहरू अन्य स्रोतहरूबाट मतको रूपमा सेवा गर्छन्.
वैकल्पिक रूपमा, ब्याकलिंकहरू लिंकहरू लिंकहरू हुन्छन् जब एक व्यक्ति ब्याकलिङ्क दिइन्छ जुन लिङ्क गरिएको साइटमा कुनै पनि मान स्थानान्तरण गर्दैन।. लिङ्क nofollow बनाउन, एक लेखकले लिङ्कको HTML मा अतिरिक्त बिट पाठ थप्न आवश्यक छ. एचटीएमएल कोड जाँच गर्दै, तपाईं पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि एक लिङ्क पछ्याउने हो भने वा nofollow. उदाहरणको लागि, यूट्युब, फेसबुक, ब्लगहरू र फोरमहरूको सबैभन्दा ठूलो रकम लिङ्कहरू लगभग सधैँ नोफाइक छन्. तपाईंको ब्रान्ड प्राधिकरणको लागि अझै पनि ठूलो छ, तर तपाईले खोज इन्जिन रेटिङमा कुनै पनि वृद्धि गर्न सक्दैन.
आने वाला लिंक्स को मूल्य को निर्धारण कसरि गर्नुहोस?
त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कारकहरू छन् जसले ब्याकलिङ्कहरूको मूल्य र प्रभाव निर्धारण गर्न खातामा लिइन्छ.
हामीलाई केही आवश्यक ब्याकलिंक गुणस्तर निर्धारणकर्ताहरूबारे छलफल गरौं:
उच्च-गुणस्तर साइटहरूबाट बाह्य लिङ्कहरू अप्रासंगिक र कम-गुणस्तर साइटहरूबाट आएका वेबसाइटहरूको अनुकूलनका लागि अधिक उपयोगी छन्; (1 9)
अद्वितीय डोमेनबाट लिङ्कहरू साइटहरू जुन तपाइँको सामु राखिएको छ देखि लिङ्क भन्दा बढी साइटमा अधिक मूल्य ल्याउन सक्छ; (1 9)
सामाग्री लिङ्कसंग सम्बन्धित प्रयोगकर्ताहरूले अपरिहार्य विषयहरू भन्दा राम्रो प्रयोगकर्ताहरूलाई स्वीकार गरेका छन्; (1 9)
प्रासंगिक र अनुकूलित लंगर ग्रंथहरूसँग लिङ्कहरू थप कीवर्डमा ध्यान केन्द्रित पारित गर्दछ, खासकर यदि तिनीहरूले तपाईंको ब्रान्ड नाम जस्तो आवाज सुन्छन्.
ट्राफिक उत्पन्न गर्ने ब्याकलिंकहरू कसरी सिर्जना गर्ने?
प्रयोगकर्ताहरू द्वारा साझेदारी गरिनेछ जुन सामग्री (1 9)
तपाईंको ई-वाणिज्य साइटमा कार्बनिक ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका लिखित, भिडियोमा ठूलो र सम्मोहक सामग्री सिर्जना गर्न हो। वा अडियो फारम जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको इच्छाद्वारा साझेदारी गर्नेछ.
आफ्नो उत्पादनको समीक्षाहरू सिर्जना गर्नुहोस् (1 9)
अर्को सरल तर उपयोगी लिङ्क निर्माण प्रविधिले तपाइँका उत्पादनहरूको राम्रो समीक्षाहरू सिर्जना गर्न ब्लगर्सहरूमा पुग्न. यो स्वाभाविक रूपमा तपाईंको साइटमा एक लिंक फिर्ता गराउनेछ Source .